प्रचण्डमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले संगीन आरोप (हेर्नुहोस् पत्रको पूर्णपाठ)
काठमाडौं – पछिलो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्किएको विवाद अब ‘पत्र–युद्ध’मा हुन थालेको छ । कात्तिक २५ गते प्रधानन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १० पन्ने लामो पत्र लेखेपछि त्यसको तीनदिनपछि शुक्रबार प्रचण्डले ओलीलाई ७ पन्ने पत्र लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डमाथि उनको पदको भुमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा आफ्नो भागमा परेको कामका सन्दर्भमा के गर्नुभयो भनेर समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
‘कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनु भएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामका सन्दर्भमा के गर्नुभयो? पछिल्लोचोटि १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम कहाँ पुग्यो? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा लेखेका छन् ।’
‘महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेण्डा र प्रस्ताव तयार गर्ने के के गृहकार्य गर्नुभयो? र त्यसमा मसँग यहाँले के सहयोग माग्नुभयो? या मैले काँही बाधा अवरोध पो र्पुयाएँ कि,’ उनले थप भनेका छन्। आफूलाई बैठकबाट भाग्न खोजेको भनेर गलत आरोप लगाइएको समेत उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यसूची तय गरेर बैठक बस्न र मर्यादित ढंगले छलफल गर्न आफू तयार रहेको भन्दै उनले स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयअनुसार तोकिएको अवधि (चैत २०७७) मा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।
पार्टी फुटाएर आआफ्नो बाटो हिडौं भन्यो भनेर लगाइएको आरोप उनले अस्वीकार गरेका छन् ।
" scrolling="yes" src=" ">
#प्रधानमन्त्री #केपी_शर्मा_ओली #पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड #पत्र
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २९, २०७७ ०४:१३